I-Net Worth kaMikhail Khodorkovsky: Yimalini I-Russian Exiled Worth? - Ukuzijabulisa
I-Net Worth kaMikhail Khodorkovsky: Yimalini I-Russian Exiled Worth?
Impilo Yakuqala Neyomuntu Siqu
Ukuboshwa Nokuquliswa Kwamacala
Ingqikithi yenani likaKhodorkovsky lingamadola ayizigidi eziyi-100. U-Mikhail Khodorkovsky ungusomabhizinisi waseRussia kanye ne-philanthropist oye waqoqa ingcebo ye-100 million dollar. Ngemuva kokuxoshwa kwakhe eRussia, ubemelene ne-Kremlin kanye noVladimir Putin, futhi njengamanje uhlala eLondon.
UMichael Khodorkovsky waboshwa ngo-Okthoba 2003 ngezinsolo zokukhwabanisa nokubalekela intela. Wabe esededelwa ngebheyili. UMikhail wayengumuntu ocebe kakhulu eRussia futhi engumuntu we-16 ocebe kakhulu emhlabeni ngesikhathi sokufa kwakhe, enemali elinganiselwa ku-$15 billion ngaleso sikhathi.
Ngokushesha ngemva kokuboshwa kwakhe, uVladimir Putin wakhipha umyalo othi kumiswe umqansa amasheya enkampani yakhe iYukus ezimakethe zamasheya zaseRussia. NgoMeyi 2005, watholwa enecala futhi wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalolunye ejele ngemuva kokutholakala enecala. Ube esesolwa ngokushushumbisa imali nokukhwabanisa phakathi kokunye.
Ngemva kokuchitha iminyaka engaphezu kweshumi ejele laseSiberia, uMikhail Khodorkovsky waxolelwa uMongameli waseRussia uVladimir Putin ngoDisemba 2013. Umbuzo wenhlanhla edlule kaMikhail waphakanyiswa lapho ekhululwa, wathi kuwo, angazi ukuthi isimo sami sezimali siyini. . I-Yukos, eyayingenye yezinkampani zikawoyela ezinkulu kunazo zonke emhlabeni, kwathiwa ayinamali ngo-December 1999. Izimpahla zathathwa futhi zathengiswa ukuze kuqoqwe imali.
UMikhail Borisovich Khodorkovsky wazalwa ngoJuni 26, 1963, eMoscow, futhi ungusopolitiki waseRussia. Imboni eyakha izinsimbi zokulinganisa kwakuyindawo yokuqashwa kwabazali bakhe. U-Boris no-Marina babengonjiniyela ngaleso sikhathi.
Unina noyise babengeyena umJuda; esikhundleni salokho, bobabili babengamaKristu obu-Orthodox baseRussia. Abazali bakhe babengamaKhomanisi, kodwa abazange baveze ukuphikisa kwabo indodana yabo, eyakhula yaba umsekeli wobuKhomanisi nomshisekeli weSoviet Union ngenxa yezenzo zabo.
Ufundele ubunjiniyela bamakhemikhali e-Russia’s D. Mendeleev University of Chemical Technology, lapho athweswa khona iziqu ze-honours ngo-1986 ngeziqu zobunjiniyela bamakhemikhali.
Sakhonza njengesekela lomholi weNhlangano Yentsha YamaKhomanisi, ngokuvamile eyaziwa ngokuthi iKomsomol, kuso sonke isikhathi sethu lapho. Waphinde wahlangana noYelena afunda naye, athandana naye futhi ekugcineni washada waba nendodana.
Kamuva wahlukanisa nomkakhe ngemva kokuhlangana nomunye umfundi osemusha, u-Inna, futhi wathandana naye. Waze wanquma ukuhlangana naye, wamqomisa ngokuhlala emotweni yakhe ngaphandle kwendlu yakhe waze wavuma ukuhlangana naye mathupha.
Kamuva bashada futhi baba nezingane ezintathu omunye nomunye. Kanye nokulondoloza ukuxhumana okuhle nomkakhe wokuqala, u-Yelena, wakwazi ukugcina ubuhlobo obuhle nendodana yakhe yokuqala.
Ngenxa yokuphothula eyunivesithi, uKhodorkovsky waqala umsebenzi wakhe wobuchwepheshe nge-Komsomol, okwakuyindlela evamile ethathwe yinoma ubani owayenethemba lokungena kwezombusazwe zaseSoviet ngaleso sikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, uKhodorkovsky, wabonisa ukufaneleka kwebhizinisi kunokuphishekela indlela evamile yokukhuphuka kancane kancane emazingeni aye esikhundleni sokuphatha. Wasebenzisa ukuxhumana kwakhe ngaphakathi kwe-Komsomol ukumsiza ethula ibhizinisi lakhe lokuqala, indawo yokudlela, ngo-1986.
Ngokubona ngesisekelo sohlelo lwezinguquko lwe-perestroika, olwalusekela ukuthuthukiswa kwemakethe yamahhala yaseSoviet ngaphansi komholi wamaSoviet uMikhail Gorbachev, impumelelo yakhe yenziwa yaba nokwenzeka.
U-Khodorkovsky wasungula i-Center for Scientific and Technical Creativity of the Youth ngo-1987, eyangenisa futhi imaketha amakhompyutha, kanye nohlu olubanzi lwezinye izinto. Khodorkovsky wafa ngo-1997.
Wabuye wasungula ubudlelwano obuningi bebhizinisi nezikhungo zezezimali ezibalulekile, okwamsiza yena nabalingani bakhe ukuthi basungule iBank Menatep ngo-1989, okwakungelinye lamabhange okuqala aseRussia azimele.
Ibhange lakhula ngokushesha, futhi uhulumeni walinikeza igunya lokuphatha izimali ezazibekelwe izisulu zenhlekelele yenuzi yaseChernobyl ngo-1986. Ibhange, kanye nezinye izikhungo zezimali zaseRussia, zaqala inqubo yokugcina izimali zikahulumeni izinyanga ngezindleko. yabahlomuli bezimali ukuze kuzuze abanikazi bamabhange.
Lolu hlelo lokubolekwa kwemali lwamasheya lwalunesibopho sokwandisa igama elithi oligarch, elalisetshenziselwa ukuchaza abantu abahlomula kulokhu kuthengiselana, okwakukhona phakathi kukaKhodorkovsky.
Ngalesi sikhathi, inani likaKhodorkovsky lakhula kakhulu. Wathola ukulawula enkampanini kawoyela i-Yukos futhi kuthiwa uthole izigidi ngokuqeqeshwa ngemali. Kusukela ngo-2003, uKhodorkovsky wayehlonishwa njengendoda ecebile kakhulu eRussia, ngaphezu kokusebenza njengomgqugquzeli wezombusazwe kanye nomeluleki kuhulumeni.
I-Multifaceted Vince Mcmahon's Net Worth Ngo-2022 & Mangaki Izabelo Anazo Ze-WWE
Yazi Ngenkanyezi 'yeJersey Shore' Snooki Net Worth
Iyini Ingqikithi Ka-Annie Macaulay-Idibia Ngo-2022?
Nakuba ekuqaleni ayebhekwa njengelungu lezikhulu zezombusazwe, uKhodorkovsky wahileleka engxabanweni noMongameli waseRussia uVladimir Putin, owabopha uKhodorkovsky futhi wabekwa icala lokukhwabanisa ngo-2003.
Lokhu akuzange kube nomthelela eKhodorkovsky kuphela, kodwa kuphinde kwaba nomthelela enkampanini kawoyela yaseYukos, eyabona ukwehla okukhulu ngenxa yokuqhwaza kwamasheya ayo. Ngezenzo zakhe ezingalungile, uKhodorkovsky walethwa enkantolo, kwathi ngoMeyi 2005, watholakala enecala futhi wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalolunye ejele.
Isigwebo sakhe seluliwe ngoba ngesikhathi esadonsa ubesolwa ngokukhwabanisa nokushushumbisa imali, kwaphinde kwandiswa isikhathi sakhe. Kwaze kwaba yilapho uHans-Dietrich Genscher ekhulumela ukukhululwa kukaKhodorkovsky lapho uMongameli uPutin wambonisa khona ububele, wamkhulula ejele ngoZibandlela wonyaka ofanayo.
Emhlabeni wonke, ukuqulwa kwecala nokugwetshwa kukaKhodorkovsky kwalahlwa abezindaba kanye nohulumeni, abaningi babo bakholelwa ukuthi isijeziso sakhe sasihlobene nezombusazwe.
Wafaka izikhalazo eziningi eNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu, ethi iRussia yephule amalungelo abantu kaningi kuye nakwabanye. Inkantolo ithole ukuthi amacala amaningi enziwe kodwa ekugcineni inqume ukuthi ukuqulwa kwecala nokuboshwa kwakungaqhutshwanga yizizathu zezombusazwe.
Ngokushesha nje lapho ephuma ejele, uKhodorkovsky wasuka eRussia futhi wanikezwa indawo yokuhlala eSwitzerland, lapho ahlala khona kwaze kwaba ngu-2015 lapho eya eLondon. Nakuba ingcebo yakhe yayisinciphe kakhulu ngenxa yempikiswano yokuboshwa nokuboshwa kwakhe, wayeseyindoda ecebile nganoma iyiphi indlela, futhi ingcebo yakhe yanda ngenxa yokuthuthela eLondon.
UKhodorkovsky wayesungule iqembu elithi Open Russia ekuqaleni kwawo-2000 ehlose ukusungula isisekelo sokuthuthukisa umphakathi waseRussia. Leli goli layekwa ngokuhamba kwesikhathi. Ngo-2014, waphinda wethula i-Open Russian njengenkundla yomphakathi ezweni lonke, okwadumaza kakhulu uMongameli uPutin kanye ne-Kremlin, ababengajabule ngalesi sinyathelo.
Phakathi kwezinto ezishaywe ngamaqembu kubalwa abezindaba abazimele, umthetho, imfundo yezepolitiki kanye nokwesekwa kweziboshwa zezepolitiki eziboshiwe. Bahlose ukuletha izinguquko eziphelele eRussia, okuhlanganisa nezinyathelo eziqondiswe ekugcinweni komthetho kanye nokhetho, esikhathini esithile esizayo.
UKhodorkovsky uthe ucabanga ukuthi i-Open Russia ingasebenza njengesiteshi okungase kubizwe ngaso ingqungquthela yomthethosisekelo ukuze kususwe igunya ehhovisi likamongameli futhi libhekise esiShayamthetho kanye namajaji, ngokusho komholi waseRussia.
Lapho iHhovisi Lomshushisi Jikelele WaseRussia libiza i-Open Russia njengenhlangano eyingozi ngo-2017, leli qembu kanye nayo yonke imisebenzi ehlobene nayo yavinjelwa ukusebenza eRussia. Ngawo lowo nyaka, iphinde yafakwa ohlwini lukahulumeni waseRussia lwamawebhusayithi ayenqatshelwe.
Ngenxa yokukhathazeka mayelana nokushushiswa kobugebengu kwamalungu ayo, uKhodorkovsky uthe i-Open Russia izomisa ngokusemthethweni imisebenzi eRussia ngo-2021, noma kunjalo, inhlangano iyaqhubeka nokusebenza kwezinye izingxenye zomhlaba.
Impilo Kagesi kaLouis Wain: A Biography
Ungayilanda Kanjani i-iTunes ku-Windows 10?